စစ်တပ်က အဓမ္မပေါ်တာဆွဲပြီး အထုပ်အပိုးများ ထမ်းခိုင်းသော ကရင်ရွာသူရွာသားများကို တိတ်တဆိတ် ချောင်းမြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အတင်းအဓမ္မလယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းတာတွေနဲ့အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုတွေ ပပျောက်စေဖို့အတွက် တပ်မတော် အရာရှိကြီးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO က လာမယ့် မတ်လဆန်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် သင်တန်းပေးဖို့ရှိတယ်လို့ စုံစမ်းသိရပါတယ်။
ဒီသင်တန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့က စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်မှာ ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပြီး ဒီသင်တန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ILOရဲ့ စီမံချက်အရာရှိ ဦးချစ်တင်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
"ဒီသင်တန်းက အင်မတန် အရေးကြီးတယ် ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်မှုးကြီးတွေကို ပို့ချရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတော့ စစ်မက်ဖြစ်ပွားတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပေါ်တာအဖြစ်နဲ့ ခိုင်းစေမှု မရှိအောင်ရယ်၊ တပ်မတော်က တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မြေယာသိမ်းပိုက် ပြီးရင် နောက်ဆုံး ဖြစ်လာတော့ အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှု ဖြစ်လာတော့။အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ"
ဒီသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ဖို့ကို နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO)အနေနဲ့ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့နဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ အပြင်၊မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒုတိယ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်က တပ်မတော် အရာရှိကြီးတွေကို နှစ်ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပို့ချမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အစိုးရစစ်တပ်အတွင်းက ကလေး စစ်သား ၆၄ ဦးကို မိသားစုထံ ပြန်ပို့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တပ်မတော်ကို ဝေဖန် တဲ့ ဆွေးနွေးမှု လွှတ်တော် မှတ်တမ်းမှာ ဖျက်စေလို
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ရုပ်သိမ်းရေး လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောထားကွဲလွဲ
မြန်မာနယ်စပ်အနီး တရုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု စတင်
ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုအတွက် တရားစွဲခံထားရသူ တပ်သား ၂ ဦးကို စစ်ခုံရုံးက တရားသေလွှတ်
MNDAA သတင်းနဲ့ ကြေညာ ချက်တွေ ဖေါ်ပြရင် အရေးယူမယ့် အကြောင်း စစ်တပ်သတိပေး
ပညာရေး ဥပဒေပြုပြင်ရေး တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေး
မြန်မာစစ်တပ်ကို သင်တန်းပေးရေး အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်များဝေဖန်
Only the Colonels and Lt. Cols are trained is not enough, the Generals must be trained too because lower rank officers have to obey the lawful or unlawful command given by the generals. Lower rank officers cannot refuse the order saying " We want the water, don't want to hear the pot to carry the water is broken".
Feb 23, 2013 04:23 AM